I-Empire State Building ukuze ibonise abathengisi bePop-up ukubhiyozela iminyaka engama-90
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Empire State Building ukuze ibonise abathengisi bePop-up ukubhiyozela iminyaka engama-90
Indawo yokupasa ubugcisa ephumelela amabhaso evela kwindawo yaseBronx ePort Morris iya kuthengisa iibhiya ezine ezikhethiweyo- i-American Pale Ale, i-World Gone Hazy IPA, uSmile My Guy IPA, kunye no-Das Bronx Oktoberfest- ukusuka kwinqwelo ekhethekileyo ye-90th Anniversary kwi-Empire State Building's 86th umgangatho.
Kunyaka we-90, i-Empire State Building (ESB) ine-toast eninzi njengoko izisa i-Oktoberfest kwi-iconic ye-86th Floor Observatory kunye neBronx Brewery rhoqo ngoLwesine ukuya ngoMgqibelo, ngo-Okthobha u-14-30 ukusuka ngo-5 ukuya ku-9 ngokuhlwa. ixesha lokuqala kwimbali yokwakha ukuba iziselo ziya kunikezelwa ngaphakathi kumava e-Observatory.
“Siyaqhubeka nombhiyozo we-90th weSikhumbuzo se-World's Most Famous Building oku kubanjiswene nabathandwa yi-Bronx Brewery,” utshilo uJean-Yves Ghazi, umongameli we-Empire State Building Observatory. “Ngokumiliselwa kwendalo yethu ekhokelela kushishino lokusingqongileyo, iindwendwe zethu zinokonwabela imiboniso yethu emitsha ecingisisiweyo, entywilizayo kunye neetactile ngokuzithemba ngaphambi kokuba baphumle ngesiselo sangokuhlwa kunye neyona miba mihle inemigangatho engama-360, evulekileyo evakalayo eNew York IsiXeko singanikezela. ”
I-State State Building eyakhe i-STATE Grill kunye ne-Bar ziya kubonelela nge-10 yeedola ze-NY zesitayile esincinci kunye nokukhethwa kwe-brewer. I-Bronx Brewery ngumthengisi wesibini kwinkqubo yokwakha i-Observatory pop-up emva kwempumelelo ka-Agasti kunye noMthengisi wam wecookie.
"Siyazingca ngokujoyina i-Empire State Building ukubhiyozela i-Oktoberfest embindini weSixeko saseNew York," utshilo uSean Valenti, isithethi seBronx Brewery. "Umsebenzi wethu ujikeleze kuluntu, ukuyila, kunye nokubandakanya, zonke ezo zinto zithi qatha engqondweni xa sicinga nge-Empire State Building."
Iindwendwe ziyakhuthazwa ukuba zisele iziselo zazo kumfanekiso obonakalayo we-86th Floor Observatory kunye neefoto ze-tag nge #PopUpTop ithuba lokuvezwa kumajelo asekuhlaleni e-ESB. Iipopuphu zenyanga ezizayo kwi-Empire State Building Observatory ziya kubhengezwa ngokwahlukeneyo.